IScotland Fold, ikati enenkangeleko emnandi | Amakati eNoti
Zonke iikati, ngaphandle kohlobo lwazo okanye umnqamlezo, zinento ekhethekileyo. Kwimeko yeFolda yaseScotland, iindlebe zakhe ezijingxileyo kunye nokujonga okumnandi kwenza ngaphezulu kwesinye nangaphezulu kwesibini bafuna ukwabelana ngobomi bakhe kunye naye.
Le yenye yezona ntlobo zaziwayo, kwaye nomlinganiswa wayo uyathandeka. Uhlala kakuhle nabantwana, kwaye uyakuthanda ukuba liziko lokuqwalaselwa, into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo ibhenele kwabo bantu bakonwabeleyo ukugcina inkampani yabo enoboya. Funda konke malunga neScotland Fold.
1 Imvelaphi yeSkotland
2.1 Lithini ixesha lokuphila lobomi baseScotland?
3 Ukuziphatha kohlobo
5 Ixabisa malini ifolda yaseScotland?
5.1 Ungafumana iikati zaseScotland simahla?
Imvelaphi yale kati intle ifumaneka eScotland, nangona kukholelwa ukuba inokuba nayo nemfuza yaseTshayina. Ngo-1961 isibini saseScotland sagqiba kwelokuba siwele ikati yabo uSuzie, owayeneendlebe ezingathandekiyo IBritish Shorthair. Kwiminyaka emihlanu kamva babhalisa ezi zinoboya ngokwazo njengeScotland Fold. Emva koko, impumelelo yohlobo lwanda kuphela. Nangona kunjalo, ngo-1974 amaqumrhu asemthethweni amaNgesi kwafuneka ayivimbe, kuba ezi zilwanyana zaziphethwe sisifo samathambo emalungwini abangelwa luloyiko olubalaseleyo lwe-Fold.
Ngethamsanqa, kwiminyaka embalwa kamva isisombululo sasiza kuvela ezandleni zabafuyi baseMelika kunye nakwimizila yemfuza. Kwavela ukuba ingxaki ibangelwe kukubhangiswa kweScotland Fold; xa ezinye iintlobo zangenelela, ezinje ngeScotland Straight okanye iBritish Shorthair, iikati zazingenangxaki ngokudibeneyo. A) Ewe, ngo-1974 yamkelwa ngokusesikweni nguMbutho weCat Fancy (ICFA).
Ifolda yaseScotland Yikati ephakathi ngokomlinganiselo, inobunzima obungu-4 ukuya ku-6kg ukuba yindoda, kunye no-3 ukuya ku-5kg ukuba ngowasetyhini.. Lubonakala ngokuba nomzimba onezihlunu kunye nobumbeneyo, unentloko ejikelezileyo, iindlebe ezijingayo, kunye nempumlo emfutshane kodwa ebanzi.
Umsila ubude obuphakathi kwaye uphela kwindawo. Izinwele ziphakathi okanye zifutshane, kwaye zinokuba nangowuphi na umbala okanye ipateni.
Lithini ixesha lokuphila lobomi baseScotland?
Ukuba ufumana unonophelo olufanelekileyo yonke imihla yobomi bakho, kuyinto eqhelekileyo ukuba uphile 15 iminyaka. Kodwa siyanyanzelisa, ngenxa yoku, kufuneka kufezekiswe iimfuno ezithile esiza kubona ngezantsi.
Yikati entle kwaye iyathandeka. Kukwanjalo unothando kakhulu, uzolile kwaye uxhomekekeKulungile, njengoko ikati ixhomekeke ku 🙂. Akakuthandi ukuchitha ixesha yedwa, ke ukuba uza kuba uhamba iiyure ezininzi rhoqo, kungcono ukuba uze nomlingane oza kudlala naye, okanye ubuncinci umshiye nezinto azenzayo, ezinje ukudlala umdlalo ohambelana neekati okanye ukukhangela iziqwenga zokutya ozishiyileyo zifihliwe. Eminye, ihambelana ngokugqibeleleyo nayo nayiphi na indawo, nokuba yindawo yokuhlala, iflethi okanye indlu.
Njengomdla, kufuneka kuthiwe ilizwi lakhe limnandi kakhulu kwaye ungasithanda isihlobo sakho kunabanye. Kodwa, ewe, wonke umntu uya kuphathwa ngentlonipho efanayo 😉.
Ukuze i-furry yakho ihlale isempilweni ixesha elide kangangoko kunokwenzeka, kuya kufuneka uyinike uthotho lweenkathalo, ezi:
Ukutya: kufuneka ibe ikumgangatho ophezulu, isimahla iicereals kunye neemveliso.
Ucoceko: Amehlo neendlebe kufuneka zicocwe kabini okanye kathathu ngeveki nge-gauze ecocekileyo kunye namaconsi athile wamehlo.
ZeMpilo: Nangona isempilweni entle, iisampulu ezineenwele ezinde zinokuba neebhola zeenwele ezisuswe nge-malt yeekati.
Ixabisa malini ifolda yaseScotland?
Ukuba uza kuyithenga kwindawo yokutshutshisa, into yesiqhelo kukuba bayabuza phakathi 700 kunye nama-1000 euros. Kwivenkile yezilwanyana zasekhaya kunokubiza isiqingatha ngaphezulu okanye ngaphantsi. Kodwa nokuba uyokuyithenga phi, kufuneka uqiniseke ukuba isilwanyana sisempilweni entle, sinamandla kwaye asinazimpawu zesifo.
Kwakhona, Kubaluleke kakhulu ukuba ungahlukananga nomama kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezimbini, kuba ebudaleni kufuneka afunde izinto anokufundiswa ngumama wakhe kuphela, ezinje ngendlela ikati emele ukuziphatha ngayo. Kwaye ukuba bamlindile ukuba ajike iinyanga ezintathu, ngcono, kuba ngaleyo ndlela unokuqinisekisa ukuba ngekhe abe neengxaki zokungazithembi kwikamva.
Ungafumana iikati zaseScotland simahla?
Ukuba ufuna usapho lwakho luhlale nekati yolu hlobo kwaye ungathanda ukufumana injana yasimahla, kuya kufuneka uyazi loo nto kunokwenzeka ukuba uphume ngethamsanqa. Njengokuba iluhlobo olusulungekileyo, abafuyi benza konke okusemandleni ukukhusela uhlobo, kwaye oko kubandakanya inkcitho.
Kodwa unokufumana isampulu yabantu abadala yokwamkelwa, okanye ikati exubekileyo.
I-fold yaseScotland yindoda enoboya enenkangeleko kunye nomlinganiswa owenza ukuba athandane naye ngaphezu kwesinye. Ke ngoko, siza kugqiba eli nqaku ngokuncamathisela eminye imifanekiso ukuze uzonwabele.:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » IScotland Fold, ikati enamehlo amnandi
UDaniel Villanueva sitsho
Molo, ndikhangela isibaya saseScotland, nceda unxibelelane nam ukuba unayo kwaye ungakanani, okanye ukuba uyazi umntu oyithengisayo.
Phendula kuDaniel Villanueva
Sicebisa ukuba ujonge iifama zekati zolu hlobo kwindawo yakho.